Wararka - Sodium Hypochlorite soosaarka mashiinka si looga hortago COVID-19
Mashiinka sodium Hypochlorite soosaarida si looga hortago COVID-19
Xogtii ugu dambeysay ee ay soo saarto Xarumaha Mareykanka ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada 5-tii waxay muujisay in 106,537 kiis oo cusub oo la xaqiijiyay laga soo tabiyay Mareykanka 4-tii, taasoo cusub ka dhigeysa tirada kiisaska cusub hal maalin oo keliya waddan adduunka ah. . Xogta ayaa muujineysa in celceliska tirada kiisaska cusub ee maalin keli ah Mareykanka gudihiisa 7-dii maalmood ee la soo dhaafay ay gaareen ku dhowaad 90,000, taasoo mar kale diiwaan gelisay tirada ugu badan ee kiisaska cusub hal maalin gudahood 7 maalmood gudahood dilaacista. Waxaa jiray 1,141 dhimasho cusub 4tii, tii ugu badneyd tan iyo bartamihii Sebtembar. Cudurkii ugu dambeeyay ee ka dillaacay Mareykanka si aad ah ayuu dib ugu soo kabtay, tilmaamayaal muhiim ah sida tirada kiisaska cusub ee la xaqiijiyay, tirada kiisaska isbitaalada la dhigay, iyo heerka wanaagsan ee baaritaanka virus-ka oo sii wadaya sameynta diiwaanno cusub. Kordhinta kiisaska cusub sabab uma ahan kordhinta baaritaanka. In kasta oo tirada baadhitaannadu sidoo kale sii kordhayaan, haddana kororku aad ayuu uga yar yahay kororka tirada kiisaska la xaqiijiyay.
Xaaladdaan oo kale, wakiilka jeermiska sodium hypochlorite xal jeermiska ayaa si ballaaran oo deg deg ah loogu baahan doonaa meelo kala duwan.
Waxaa jira hal macmiil oo ka socda Ameerika oo dalbaday hal set oo ah 3500litrs / maalin 6% sodium hypochlorite sodium hypochlorite oo soo saarta shirkaddeena, si ay ula kulanto shuruudaha suuqa ee Mareykanka. Naqshadaynta, been-abuurka, isku-ururinta iyo hawlgelinta qalabka durba dhammaaday diyaarna u ah bixinta hadda
Xalka soodhiyamka la soo saaray ayaa loo isticmaali karaa jeermiska dariiqa, supermarket, guriga, isbitaalka, dhismayaasha, biyaha la cabo, iwm si loo dilo fayraska loogana hortago fiditaanka qafiska-19.
Waxaan ka caawin doonnaa macmiilka inuu rakibo qalabka oo aan ka caawinno macmiilka inuu bilaabo soo saarista xawaaraha degdegga ah iyo inuu helo suuqa iibka sida ugu dhaqsaha badan.
Xaaladda hadda jirta ee CONVID-19, mashiinka sodium hypochlorite soo saarista waxaa u baahan doona dalal aad iyo aad u tiro badan.
Sifeeyaha Roorka Biyaha Nadiifinta, Geedi socodka macaaneynta, Naqshadeynta Nidaamka Nidaamka 'Sodium Hypochlorite', Biyaha Badaha Si Loo Cabbo Mashiinka Biyaha, Ro Water Filter Qaybaha Dayactirka, Nidaamka Sifeeyaha Xirfadlaha,